Golaha cusub ee deegaanka degmada Gaalkacyo oo magacyadooda la shaaciyay
Posted on July 14, 2016RBC, Wararka
Gaalkacyo (RBC Radio) Guddiga hagaajinta maamulka gobolka iyo dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa maanta shaaciyay magacyadda xubnaha golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo oo xarun u ah gobolka Mudug.
31 xubnood oo saddex ka mid ah ay dumar-yihiin ayaa maanta lugu dhawaaqay,kuwaaso noqonaya xildhibaannada cusub ee golaha deegaanka degmada Gaalkacyo,kaddib markii dhawaan uu madaxweynaha Puntland kala diray golihii hore.
Golaha deegaanka ee degmada ayaa qorshuhu yahay in ay dhawaan doortaan duqa degmada Gaalkacyo oo sidoo kale noqon doono guddoomiyaha golaha iyo ku-xigaankiisa.
Dhowr musharrax ayaa horay u shaaciyay inay u tartamayaal xilka duqa degmada Gaalkayo.
Hoos ka akhriso magacyadda xildhibaannada cusub ee golaha deegaanka degmada Gaalkacyo:-